Taxanaha TV -ga ugu wanaagsan ee 2018: waxay yihiin iyo fikradaha | I sii wakhti firaaqo
Tan iyo markii uu qarxay aaladaha qulqulka, waxaan la kulannaa qaddar aad u badan oo taxane ah oo ku jira internetka iyo telefishanka. Maanta waxay noqdeen mid ka mid ah balwadaha ugu waaweyn waxaana aad u sii adkaanaya inaad doorato cinwaanka aad maalgelin doonto saacado waqtigaaga ah. Waxaa jira aagag kala duwan oo ay ku jiraan waxyaabo tayo leh. Netflix, Amazon Prime iyo HBO waa seddex ka mid ah aaladaha ugu horreeya ee nuxurka noocan ah. Maqaalkaan waxaan ku soo bandhigayaa liiska shanta taxanaha ugu wanaagsan ee 2018 mid kasta oo iyaga ka mid ah. Waxaa ku jira isjiidka!
Xulashadu waxay ku saleysan tahay heerarka dhagaystayaasha taxanaha la heli karo iyo xilliyadooda kala duwan.
1.1 1. Aqalka Waraaqda
1.2 2. Carbon beddelay
1.3 3. Gabdhaha Cable
1.4 4. 13 Sababood
2 Amazon Ra'iisul
2.1 1. Goli'ad
2.2 2. Ninkii ku sugnaa qalcaddii sare
2.3 3. Hufnaan
3.1 1. Ciyaarta of Thrones
3.2 2. Qisadii Addoonta
3.3 3. Beenta Yar Yar
3.4 4. Ogaanshaha Dhabta ah
Waa madal aad loo isticmaalo waxaana la bilaabay 2010. Waxaa loo aqoonsaday madal -socodkii ugu horeeyey oo si guul leh u bilaabmay. Waxaa laga heli karaa ficil ahaan adduunka oo dhan marka laga reebo Shiinaha (marka laga reebo Hong Kong iyo Macao), Suuriya iyo Waqooyiga Kuuriya.
Taxanaha aadan seegi karin waa kuwan soo socda:
1. Aqalka Waraaqda
Waxaa loo aqoonsan yahay taxanaha ugu sarreeya ee aan ku hadlin Ingiriisiga ee lagu qiimeeyo taariikhda Netflix. Goobtu waxay ku taal a dhaca Warshadda Mint iyo Shaambadda Qaranka, si aan macquul ahayn u qorsheeyey "Professor -ka." Isla taas oo isu keenta koox dambiilayaal ah oo ku takhasusay aagag kala duwan. Mid kasta oo wata magac -u -yaal, waxaan ka helaynaa Tokyo, Berlin, Nairobi, Moscow, Rio, Denver iyo Helsinki oo lagu duudduubay qorshe qaadan doona wareeg aan la filayn oo ay lagama maarmaan noqon doonto in la hagaajiyo si loo gaaro yoolka.
Waxaan helnaa la haystayaal, gorgortamayaal, boolis iyo hawlo badan oo kaa ilaalin doona cidhifka kursigaaga ilaa dhammaadka.
2. Carbon beddelay
Mustaqbal fog, bulshada waxaa gebi ahaanba isbedelay farsamada. Si dadka diinta ka noqdaa ay suurtogal u tahay inay ku gudbaan waqtiga oo ay si uun u waaraan iyada oo maqaar -galaha oo ay ku jiraan dhammaan macluumaadka xusuusta iyo damiirka qof walba la dhawro. Maqaal -gelintaan waxaa la geliyaa laf -dhabarta qoorta waxaana lagu dhex beeray jirka aadanaha oo is -beddeli kara oo u dhaqma sida “dabool”.
Jilaayaashiisu waa Takeshi Kovacs, waa askari hore oo fallaagoobay oo la iibsaday oo "la sara kiciyey" qarniyo kadib mid ka mid ah ragga ugu awoodda badan ee loo diro hawl gaar ah. Abaalmarinta: xorriyad iyo nasiib!
Kovacs wuu oggolaaday, shaqo ayuu aaday, wuxuuna ogaaday xaqiiqooyin lama filaan ah oo ku saabsan noloshiisa.
3. Gabdhaha Cable
Waxaa la dhigay 20 -kii, taxanaha wuxuu ka sheekeynayaa afar saaxiibo ah oo is yaqaan oo ku shaqaynaya hawl wadeennada taleefanka ee shirkadda isgaarsiinta ugu muhiimsan xilligan Madrid. Mid kasta oo ka mid ah jilayaasha ayaa dareemaya inay ku xayiran yihiin dhinacyo kala duwan oo qoys iyo bulsho ah. Waxay u heellan yihiin inay jebiyaan tusaalooyin ku saabsan waxa ay bulshadu ka filayso iyaga.
Isla markaana a Saddex -geesoodka jacaylka ee u dhexeeya jilaaga ugu weyn, gacalisadeeda carruurnimo iyo milkiilaha shirkadda. Hareerahooda waxaa ka jira riwaayad aan dhammaad lahayn oo ay ka buuxaan jaahwareer, jacayl xamaasad leh iyo khiyaamo. Xilliga labaad wuxuu leeyahay bilow lama filaan ah oo halis gelinaya xorriyadda jilayaasha sababta oo ah waxay u tixgelin karaan inay yihiin kuwa dilka geystay.
4. 13 Sababood
Sheekada Hanna Baker ma dhammayn sheekadeeda, xilli -ciyaareedkii labaad wuxuu ku saabsan yahay dacwadda waalidkiis ee ka dhanka ah Liberty High. Intii dacwaddu socotay, waxaa la ogaaday sirro ka dhigaya in ka badan hal qof gariir. Xilligan, sawir -qaadista ayaa u muuqata qalab baaritaan
Balwadaha, ismiidaaminta, galmada, adeegsiga hubka iyo galmada ayaa weli ah mawduucyada ugu waaweyn taxanaha. U diyaari calooshaada cutubyada qaarkood oo ay ku jiraan muuqaalo aad u xoog badan.
Waa xiise nafsiyeed toban qaybood oo ka kooban taxanaha la dhigay qarnigii XNUMXaad New York oo ay jilayeen Dakota Fanning, Daniel Brühl iyo Luke Evans. Waxaan helnay a Gacan ku dhiigle caadil ah oo geysta dilal aad u fool xun. Komishanku wuxuu furaa dacwad si qarsoodi ah loo baadho weriye, xoghayaha waaxda bilayska iyo dhakhtar cilmi nafsi. Kan dambe oo loo yaqaan "shisheeyaha" wuxuu daraaseeyaa cudurada iyo dabeecadaha qalloocan ee dadka naftooda ka baxsan.
Hormuudka madal iibinta onlaynka ah ayaa go’aansaday inuu ballaariyo ganacsigiisa iyo soosaarista Prime version ee 2017. Marka xigta waxaan soo bandhigayaa taxanaha ugu wanaagsan ee Amazon Prime Video ay tahay inuu bixiyo:
Waxay ka sheekeyneysaa Billy Mcbride, a qareenka oo shaqada ka erya shirkaddii uu caawiyay. Billy wuxuu noqdaa difaac dhexdhexaad ah wuxuuna ku dhacaa khamriga. Markii dambe waxaa lagu casuumay inuu ku biiro a dagaal sharci oo ka dhan ah shirkaddaadii hore oo waxaad haysataa fursad aad naftaada ku furto. Xilliga labaad wuxuu ku qasbayaa inuu mar kale ku dhaqmo sharciga si uu u caawiyo wiilka saaxiibkiis, oo lagu soo oogay dacwadda dilka laba -geesoodka ah. Intii lagu gudajiray qorshaha, magaalada Los Angeles waxay ogaatay shirqool weyn.
2. Ninkii ku sugnaa qalcaddii sare
Waxay leedahay laba xilli oo la heli karo iyo mid saddexaad oo la sii dayn doono 2018. Qorshaha waxay ka sheekeyneysaa dhacdadii dagaalkii labaad ee adduunka aysan ku guuleysan xulafada. Tixgeli xaqiiqo ka duwan tan dunida maanta halka Mareykanku u kala qeybsan yahay aagagga ay maamulaan Naasiyiinta iyo Jabaanku. Hitler wuu ku guuleystay dagaalka!
Waa majaajilo riwaayad ah oo Mareykan ah oo sheekadiisu u sheegeyso u beddelidda transgender dadka waaweyn: Mort wuxuu noqdaa Maura Pfefferman. Qorshuhu wuxuu ku lug leeyahay qoyska oo dhan oo ka kooban saddex carruur ah oo danayste ah iyo xaas hore.
Transparent waa Taxanaha Abaalmarinta Ugu Fiican ee Amazon Prime: Wuxuu ku guuleystay abaalmarino taxanaha majaajilada iyo jilaaga ugu wanaagsan intii lagu jiray abaalmarinta dahabiga ah ee 72. Ilaa maanta, waxaa jiray afar xilli, kii ugu horreeyay wuxuu bilaabmay 2014.
Shadow Moon, waa dambiile hadda xabsiga laga sii daayay oo wajahaya geerida xaaskiisa. Adduunyada uusan fahmin, wuxuu la kulmaa Mr Arbaco oo u siiya shaqo kaaliye iyo waardiye. Hooska wuxuu ku jiraa adduun kale oo sixir jiro waxaana helnaa ilaahyo hore oo ka baqaya inay noqdaan kuwo aan quseyn farsamada iyo ilaahyada cusub awgood.
Marius wuxuu ka soo baxaa xabsiga iyo wuxuu iska dhigaa qof ay isku qol yihiin oo lagu magacaabo Pete. Wuxuu la midoobayaa qoyska Pete -ga dhabta ah wuxuuna ogaadaa dhibaatooyin waaweyn oo isagana laga yaabo inuu wax ka qabto. Qoyska cusubi ma oga oo wuxuu sii wataa charade.
Waxay bixisaa magacyada taxane American gaar ah ee kanaalka telefishanka fiilada. Daahfurka Spain wuxuu ahaa Noofambar 2016 iyadoo lala kaashanayo Vodafone waxayna ku leedahay laba qaab gudaha dalka:
HBO: nuxur joogto ah oo loogu talagalay carruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweyn oo leh waxyaabo badan oo taxane ah iyo filimo dhammaan noocyada
HBO Qoyska: Waxaa si gaar ah loogu toosiyaa dhagaystayaasha dhallinta-dhallinta. Mawduucani wuxuu ku habboon yahay da 'kasta
Shan ka mid ah taxanaha ugu wanaagsan 2018 ee madalkan waa kuwa hoos ku xusan:
1. Ciyaarta of Thrones
Waa mid ka mid ah taxanaha ugu guulaha badan sanadihii ugu dambeeyay oo leh heerar dhagaystayaal aad u fiican. Iyada oo xilli siddeedaad la soo bandhigayo sannadka 2019, waxaan helnaa weligeed dagaal u dhexeeya qoysas sharaf leh si ay u xukumaan toddobada boqortooyo oo ay u qaataan carshiga birta ah. Magacyada dambe ee Stark, Baratheon, Lannister, Targaryen, Greyjoy, Tully iyo Arryn waxay leeyihiin jilayaal siinaya taxanaha taabasho gaar ah oo khayaali ah. Taa baddalkeeda, dhammaantood waxay leeyihiin Walwalaha Cad cadow caadi ah. Xaqiiqdii waa taxane aadan ka maqnaan karin!
Waxaad ku jirtaa waqtigii aad la qabsan lahayd horudhaca xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee 2019.
2. Qisadii Addoonta
Taxanaha cusub oo la mahadiyey wuxuu ku saabsan yahay sheekada Offred, oo ah haweeney u shaqeysa sidii addoon galmo. Sheekadu waxay soo baxdaa a bulshada mala awaalka ah oo la yareeyay halkaas oo haweeneyda loo arko inay tahay hantida dawladda. Waxaa jira haween tiro yar oo bacrin ah, kuwaas oo lagu qasbo inay u adeegaan qoysaska hodanka ah iyo dhallaan carruur si loo kordhiyo tirada dadka. Qofka halyeyga ahi wuxuu la halgamayaa sidii uu u jebin lahaa taliska una soo kaban lahaa wiil laga qaatay.
Xilliga labaad wuxuu soo bixi doonaa Luulyo 2018 wuxuuna ballan qaadayaa inuu dhalin doono muran badan.
3. Beenta Yar Yar
Iyada oo ay jilayaan jilaa weyn Nicole Kidman, Reese Whiterspoon iyo Shailene Woodley, sheekadu waxay xuddun u tahay saddex guri -guri oo aad mooddo inay kaamil yihiin. Fadeexado bulsheed qarsoon ayaa la kashifay oo jilayaasha ayaa xiriir la leh a baaritaan dil.
Taxanaha ayaa loo qorsheeyey sidii taxane-yar-yar oo lagu xardhay abaal-marinnada guild ee 2017. Taxanaha ayaa aad loo ammaanay in xilli-ciyaareedkii labaad ee Meryl Streep uu ku biiri doono uu ku jiro shaqadii.
4. Ogaanshaha Dhabta ah
Waxaa la bilaabay 2014, Sarkaalka Dambi Baarista dhabta ah wuxuu leeyahay a Sheekada baaritaanka bilayska oo leh kabka madaxa bannaan xilli kasta. Goob kasta waxay ku wareegsan tahay kiisaska dilka: Xilliga 1 waxaa dhiirrigeliyay gacan -ku -dhiigle taxane ah oo la ugaarsanayay muddo 17 sano ah, halka xilli 2 uu ku saleysan yahay dilkii siyaasi reer California ah oo musuqmaasuq ahaa.
Bishii Ogosto 2017, xilli saddexaad ayaa lagu dhawaaqay oo aan weli la soo saarin.
Westworld waa a Beerta madadaalada mustaqbal ee ay maamulaan martigaliyayaal gaar ah: robots. Ujeeddada baarkinku waa ku raaxayso khiyaal kasta oo booqde iyada oo loo marayo miyir -qabad macmal ah gudaha deegaanka Galbeedka Ameerika ee hore. Soo -booqdeyaashu waxay samayn karaan khiyaal kasta, oo ay ku jiraan falal sharci -darro ah sida dil iyo kufsi.
Taxanaha ayaa leh laba xilli waxaana ku jira Anthony Hopkins oo ka mid ah jilaayaashiisa, iyo sidoo kale Evan Rachel Wood iyo Ed Harris.
Sidaad arki doonto, hore ayaad u lahayd 15 cinwaan ayaa loo aqoonsaday inay guuleysteen sanadka 2018 oo xulashadiisu ay leedahay noocyo kala duwan. Hadda haa! Ku raaxayso saacadaha soo socda adiga oo dammaanad qaadaya in xulashadaadu ay u qalmi doonto.
Hadda, haddii aad hore u aragtay dhammaan taxanaha ama aad u baahan tahay inaad hesho xulashooyin kale, waxaad la tashan kartaa liisaska aaladaha kale ee qulqulka sida Movistar +, Rakuten TV, Filmin, YouTube TV ama Hulu. Waxaan rajaynaynaa inaad jeclaatay liiskan taxanaha telefishanka ugu fiican sannadkan!
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Taxanaha TV -ga ugu wanaagsan ee 2018